Slọ ọrụ eletriki skuuta - ndị na-emepụta ọkụ eletrik, ndị na-eweta ya
Ejiri batrị EcoReco na 50% si na igbe maka mma gị ka ị nwee ike ịnya ya ozugbo.
Jiri chaja EcoReco ka ị na-ebugharị batrị mgbe ịgụ batrị na dashboard dị obere. Mpaghara kachasị dị mma iji kwụ ụgwọ dị n'agbata ogwe 1-4. Batrị LiFePO4 enweghị mmetụta ebe nchekwa.
Na-atụ anya ka batrị na-akwụ ụgwọ site na efu ruo 80% na 2 awa (akwadoro) ma ọ bụ site na efu ka o zuru ezu na awa 4.5.
1. Gbaa mbọ hụ na agbanyụrụ skuuta ahụ, wee mepee okpu n'isi nke oghere nkwụnye ụgwọ dị n'akụkụ kickstand.
2. Jikọọ chaja okirikiri plọg na scooter odori anya, wee jikọọ chaja 3 prong plọg na ike tinyekwa.
3. Batrị na-akwụ ụgwọ mgbe chaja ikanam na-acha ọbara ọbara. Chaja ikanam na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe ọ dị pasent 85%. Can nwere ike ịga n'ihu na-akwụ ụgwọ skuuta ma tinye ya maka oge 1-2 ọzọ ma ọ dị mkpa. Iji kwụsị ịkwụ ụgwọ, biko wepu
ihe ntanetị 3 si na ntanetị, wee wepu plọg okirikiri site na nkwụnye ụgwọ nke scooter. Mechie okpu njedebe.
Ezigbo arụmọrụ - A na-eji skuuta eletrik a na 350 watt kwalite, yana ọsọ ọsọ nke 25km / h na ụzọ ụgbọ ala 30km, nke nwere ike ijikwa 15% steepụ dị mfe.
Otu-nzọụkwụ mpịachi imewe-na electric skuuta nwere ike apịaji ngwa ngwa site 1 abụọ n'aka-pịa mpịachi. Mgbe apịaji, enwere ike iji otu aka buru ya, na-eme ya ezigbo onye njem.
Nchekwa na ala-braking bụ mụ na a pụrụ ịdabere. Usoro braking magburu onwe ya na-eme ka brek zaghachi ngwa ngwa ma mekwaa nchebe n'oge eji. Onye na-atụ ụjọ n'ihu na-enye onye ọkwọ ụgbọ ala nkasi obi kachasị. The elu-arụmọrụ breeki aka usoro nwekwara EBS ike mgbake braking ọrụ, na azụ fenda nwekwara braking ọrụ. Ejiri wiil ndị dị n'ihu na-eme ka ha nwee ike ịnya mmiri, nke nwere ike ime ka ịnya ụgbọ ala dịkwuo ike.
Easy ịnya-a ọhụrụ ụgbọ mode: Bịa na-agbalị a ụzọ ọhụrụ nke na-agba ịnyịnya a skuuta! Naanị pịa ala ka ịmalite.
Onye pụrụ iche na onye ọrụ-enyi na enyi nke a na-eji skuuta eletrik eletrik nwere ụkwụ zuru oke (nke nwere ike ịkwado nnukwu ụkwụ), ọkụ ihu iji hụ na ị na-agba ịnyịnya n'abalị, yana ihe ngosi LED doro anya iji mee ka ịnya ịnya.
Onye na-agba ịnyịnya: Ihe egwuregwu ụmụaka a na-atọ ọchị na-adabara ụmụaka maka ịnya nso. Ezubere ya maka ndị na-agba ịnyịnya 8 afọ na karịa. Oke kachasị dị na 50kg.
Motor na Throttle: motorkwụ na-arụ ọrụ nke ọma na nke dị nwayọ nwayọ nke bidoro belt, ruo 7 MPH. Ime ọsọ, kwụpụ na skuuta ma jiri bọtịnụ ome osooso mee ngwangwa.
Batrị na ịkwụ ụgwọ: kwadoro site na batrị na-adịgide adịgide na-adịgide adịgide, skuuta ụmụaka nwere ike ịga njem kilomita 7 ruo 5 n'otu ụgwọ. Gụnyere chaja.
Ugboro na brek: Igwe na-adịgide adịgide nke anụ ọhịa 6-inch na-enye ọkwọ ụgbọ ala na-enweghị ntụpọ, ebe breeki ụkwụ azụ na-ewepụ ọkụ eletrik, na-eme ka ebe nchekwa na-adị mfe ma dịkwa mfe.
Okpokoro na ịkwọ: Ogwe osisi aluminom nke dị larịị nke skuuta ụmụaka dị mfe ibufe ma chekwaa. Mgbe batrị na-agwụ, ọ na-aghọ pedal skuuta, nke nwere ike ịnya ịnyịnya na-enweghị iguzogide ma na-atọ ya ụtọ.
Electric skuuta JB516C
1. Electric skuuta napụtara n'ụzọ zuru ezu kpọkọtara si emeputa.
2. Ejiri batrị batrị na 50% site na igbe maka mma gị.
3. Electric skuuta enwe ọtụtụ ule agafe na-elekọta cycles na ụlọ ọrụ maka mma nkwa nzube. The dashboard nwere ike igosipụta oge ịgba ụgwọ ole ma ole maịlị toluru na ụbọchị nnata.